North Korea nhau dzekufamba | eTurboNews
musha » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » North Korea Kuputsa Nhau
Chikamu - North Korea Kuputsa Nhau
Breaking news from North Korea - Travel & Tourism, Fashoni, Varaidzo, Culinary, Tsika, Zviitiko, chengetedzo, chengetedzo, Nhau, uye Maitiro.
North Korea yekufambisa & yekushanya nhau kune vafambi uye nyanzvi dzekufamba. Dzazvino dzekufamba uye dzekushanya nhau kuNorth Korea. Dzazvino nhau nezve kuchengetedzeka, mahotera, nzvimbo dzekutandarira, zvinokwezva, mafambiro uye kutakura muNorth Korea Pyongyang Kufamba ruzivo. North Korea, zviri pamutemo Democratic People's Republic of Korea, inyika iri kuEast Asia inoita chikamu chekuchamhembe kweKorea Peninsula, nePyongyang iri iro guta guru uye guta hombe munyika.
North Korea Air Koryo inozivisa kutangazve kweChina ndege
Hapana ndege yakasimuka kubva kuPyongyang kuenda Beijing kunyangwe kuziviswa
North Korea Kuputsa Nhau
Nyika gumi nembiri dzinovhara mamishinari kuNorth Korea nekuda kwekushomeka kwe ...
Nhume pfumbamwe chete uye ina mhosva dzeafafaires ndivo vanomiririra nyika dzavo kuNorth Korea ...
Kuputsa Kufamba Nhau
Imwe nyowani Yekufamba Sarudzo: Kuyambuka muganho uchisunda njanji ...
Hapana gasi, hapana magetsi kana chiutsi chinodiwa. Iyi fomu yekufambisa ndeyenharaunda ine hushamwari uye ...
Kutiza Coronavirus: North Korea Tourist Resort inoda ...
COVID-19 muNorth Korea: Kuurayiwa, capital lockdown ...
Busan Inovaka Firm MICE Zvivakwa se ...
Izvo zvakapfuura uye Ramangwana reBusan seInternational ...
Emergency muNorth Korea: DPRK inoshuma COVID19 kesi
Kim Yo Jong ndiani mutungamiri mutsva anogona muNorth ...
Yemahara yeCoronavirus Nyika gumi neshanu dzinosanganisira gumi ...
Tourism yakamira muNorth Korea
North Korea inovhara muganho: Coronavirus
Ko kushanya kuchaita musangano waTrump naKim Jong-un ...
Seoul: North Korea haizotaure nezve kuputswa kwe ...
North Korea Tourism: Inotyora UN Sanctions?
Kim Jong-un anoraira South Korea nzvimbo yevashanyi yekuve ...
Seychelles inopenya paModetour Travel Mart 2019
US Treasure yakatemera North Korea nyika-inotsigirwa ...
US Treasure inoratidzira Russian mamiriro emari ...
Korea Air inogamuchira 200th Boeing ndege
North Korea inopisa mumwe chombo nhasi
North Korea ichisiya kushanya? Bvunzo moto chombo
Boston-Logan Airport: Nzira nyowani dzenyika dzese
Korean Air: Hapasisina nzungu
Hahn Mhepo inotora zvine musoro nhanho inotevera kugovera Airbus ...
Runyararo kuburikidza neyekushanya Korea mukugadzira: $ 175,562
Korean Air inobatsira nherera muManado, Indonesia
Trump Kim Summit 2019 inogona kuvhura North Korea vashanyi ...
Shanyira North Korea inoda maBritish Vashanyi uye inoisa ...
Kutanga Nyowani kweKushanya, Mitambo, uye Runyararo pane ...
North neSouth Korea kubatana: Kudya muPyongyang ...
Kufamba, kushanya uye ikozvino North neSouth Korea ...
North Korea Sachigaro Kim Jong Un akafadzwa negungwa ...
AIRBNB inotaura pamusoro pechisarudzo cheDare Repamusorosoro pamusoro peUS ...
Imwe yakabatana Korea mumitambo: Tourism inotevera?
Trump naKim vanobvumirana nezveSingapore Tourism: Shangri La ...
Nhoroondo mukugadzira: Trump naKim Jong-un zunza ...
Murume akasungwa muSingapore achinyepedzera kuchamhembe ...
“Kutsamwa kukuru uye ruvengo”: ...
Yemotokari traffic mugwagwa: Pyongyang inopa mutsva mhepo nzira ...
ICAO: North Korea inokumbira kuvhura migwagwa yemhepo pakati pe ...
North Korea yekushanya bhazi tsaona inokonzeresa 'inorema ...
Air China inokanda Pyongyang sevhisi nekuda kwe ...
VaTrump vanosheedzera North Korea "nyika inotsigira ...
Nyukireya kurwisa kubva kuNorth Korea: Iwe une 15-30 ...
Guam Tourism inodzorwa neUnited Airlines naKim ...
China: North Korea kudengenyeka kwenyika "kwete nyukireya ...
Mashoko aMunyori Mnuchin paMutungamiri Trump? S ...
Siya mumaawa makumi manomwe nemaviri: Mexico inorova North Korea ...
Trump Administration inopindura North Korea
Tourism kuNorth Korea iri kuwedzera kunyangwe kutyisidzira kwenyukireya
Imba yeUS inobvumidza zvikuru masanctions matsva ...
US State department: Vagari vemuUS vacharambidzwa kubva ...
US North Korea Kufamba Mutemo: Yese yekushanya kwekushanya kurambidzwa kuenda ...
Yevashanyi chikepe sevhisi yakatangwa pakati peNorth Korea ne ...
7.5 Kudengenyeka kwenyika muNorthern Peru November 28, 2021
Kudengenyeka kwepasi kuviri kwakarova Peru Svondo rino, asi sezvineiwo hakuna kukonzera kukuvara kupi nekupi kukuru kana kufa. Kukuvadzwa kwakanyorwa munzvimbo iri kure yeAmazon kunonyanya kurongeka.
Stephen Asiimwe kutungamira Uganda Private Tourism Sector November 28, 2021
Board of Directors reUganda Private Sector Foundation inozivisa kugadzwa kwaVaStephen Asiimwe, se Executive Director mutsva. Vanotsiva mushakabvu VaGideon Badagawa avo vakashaya muna Chikumi gore rino.
Nzira yekufamba sei neNew Covid Strain Omicron? November 27, 2021
Mutungamiri weWorld Tourism Network Dr. Peter Tarlow, uyo ari zvakare mufundisi weCollege Station, Texas Police department, uye nyanzvi yekufamba & kuchengetedzwa kwekushanya nekuchengetedzeka ane zano renyika yekushanya: Hapana nguva yekuvhunduka, asi. ino inguva yekushandisa pfungwa dzako. Zano iri rinouya mushure memazuva maviri pasi rose ramutswa nerumwe rudzi rweCorona Virus, rwunozivikanwa nezita rekuti Omicron, kana kuti nehunyanzvi mutsauko weB.1.1.529.
South Africa Mhinduro kune Zvitsva Zvakatemerwa Zvirambidzo Zvekufamba November 27, 2021
Hurumende yeSouth Africa yaona chiziviso chakaitwa nenyika dzakawanda dzekuti dziteme zvirango zvekufamba kwenguva kuSouth Africa nedzimwe nyika mudunhu iri.
Canada Zvino Yadzima Kuenda Kunyika dzeSouth Africa Nekuda kweOmicron November 27, 2021
Vakuru vehutano hweveruzhinji muSouth Africa vakasimbisa kuti imwe itsva yeCCIDID-19 yakasiyana (B.1.1.529) yaonekwa munyika iyoyo. Mumaawa makumi maviri nemana apfuura, musiyano uyu - wakanzi Omicron neWorld Health Organisation - waonekwawo mune dzimwe nyika. Panguva ino, musiyano hausati waonekwa muCanada.
Canada Kupa Nyowani Kuzviparadzanisa Saiti kubva kuCOVID-19 November 27, 2021
Hurumende yeCanada iri kushanda nevabatsiri kuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwevaCanada neVashandi veNguva Yekune dzimwe nyika muCanada, uye kuderedza kupararira kweCCIDID-19 nemamwe akasiyana muCanada. Kuzviparadzanisa nevamwe ndiyo imwe yenzira dzinoshanda dzekubatsira kumisa kupararira kweCOVID-19.
LATAM Airlines Group Zvino Mafaira Chirongwa cheKuronga patsva kunze kweChitsauko 11 November 27, 2021
LATAM Airlines Group SA nevamwe vayo muBrazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, neUnited States nhasi vazivisa kuiswa kweChirongwa cheKuronga patsva ("Chirongwa"), chinoratidza nzira yekumberi kuti boka ribude muChitsauko 11. maererano nemutemo weUS neChile. Hurongwa uhu hunoperekedzwa neChibvumirano Chekugadziridza Rutsigiro (iyo "RSA") neParent Ad Hoc Group, rinova ndiro boka guru revakweretesi vasina kuchengetedzwa munyaya idzi dzeChitsauko 11, uye vamwe vevanemasheya veLATAM.
Cancer uye COVID Tsvagiridzo: Basa reCytokines November 27, 2021
Zvichitevera kutaura kunofemerwa kwekuvhura, "Future Perspective of Cancer Immunotherapy," yakapihwa nemubairo weNobel uye mubairo weTang Prof. Tasuku Honjo pamusangano wechi14 weAsia Pacific Federation of Pharmacologist Conference (APFP) musi wa26 Mbudzi, 2020 Tang Prize Laureate's Lecture yeBiopharmaceutical. Sayenzi, yakarongeka neTang Prize Foundation uye The Pharmacological Society muTaiwan, yakaitika pa14th APFP na1:30 pm (GMT+8) munaNovember 27.
Seychelles New Kufamba Matanho Nekuda kweCOVID-19 Omicron Variant November 27, 2021
Vashanyi vanobva kuSouth Africa, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, neZimbabwe havabvumidzwe kupinda muSeychelles kutanga nhasi Mugovera, Mbudzi 27, 2021, kudzamara vaziviswa zvakare, Bazi rezvehutano reSeychelles rakazivisa. Hapana zviitiko zvekusiyana B.1.1.529 zvakaonekwa muSeychelles, zviremera zvemunharaunda zvinosimbisa.
Qatar Airways Inomisa Nekukurumidza Ndege kubva kuNyika shanu dzeAfrica November 27, 2021
Nekutsva kweCCIDID-19 Omicron mutsauko urikutenderera muSouthern Africa, Qatar Airways haichave ichitambira vafambi vanobva kunyika shanu dzeSouthern Africa mumambure ayo epasi rose nekukasika.
Netherlands inopinda mukuvhara kutsva November 27, 2021
Kunyangwe 85% yehuwandu hwevanhu vakuru munyika iri kubaiwa, kuwedzera kweNetherlands kunonzi kwakaipisisa muWestern Europe.
New COVID-19 Omicron strain iri muUK, Belgium, Germany, Netherlands neCzech Republic izvozvi November 27, 2021
Nyika dzese makumi maviri nenomwe dziri nhengo dzeEU dzakabvumirana kumbomisa kufamba nendege kubva kunyika nomwe dzekumaodzanyemba kweAfrica. Iyo UK, US neCanada dzakatemerawo zvirambidzo zvakafanana.
UNWTO General Assembly Kumisikidzwa Kunokurudzirwa: WTO Yakamisikidzwa Nekusingaperi! November 27, 2021
Imwe WTO ichangobva kumisikidza Musangano wayo mukuru wemakurukota ezvekutengeserana, wakarongwa kubva muna Mbudzi 30 kuGeneva, nekuda kwenjodzi inogona kubva kune itsva COVID musiyano. UNWTO ichatevera here? Munyori mukuru anoremekedzwa, World Tourism Network neAfrican Tourism Board vari kukurudzira UNWTO kutevera WTO.
New CDC Guidelines kune vekuAmerica paOmicron Covid Variant B.1.1.529 November 27, 2021
United States Center for Desease Control yakapa chirevo pamusoro peOmicron strain yeCoronavirus inozivikanwa seB.1.1.529
Jamaica Inozivisa New Air Services kubva kuStockholm kuenda kuMontego Bay November 27, 2021
Jamaica Tourist Board inofara kuzivisa kuti VING, inoshanda neSunclass Airlines, ichave kudzokera kunzvimbo yacho nendege dzakananga kubva kuStockholm, Sweden kuenda kuJamaica. Chirongwa chekubhururuka kwemavhiki maviri chichatanga Mbudzi 2022 uye kusvika munaKurume 2023 sechikamu chechirongwa chemwaka wechando 2022/23. VING ichashanda huwandu hwe9 kutenderera kwechando 2022/23 iine zvigaro mazana matatu nemakumi matatu netatu pandege yega yega, paAirbus A373-330neo yayo.